Induction Heating Theory kanye neTekhnoloji, yini ukufudumeza kokufakwayo
Ukushisa Ukushisa iyindlela yokushisa engenamalangabi, engathintwa yokuxhumana engaguqula isigaba esichazwe ngokunembile sensimbi yensimbi yensimbi ngemizuzwana. lapho kushintshaniswa ukugeleza kwamanje kwikhoyili yokungeniswa, inkambu yokungenisa kagesi ehlukahlukene isethwe izungeze ikhoyili, ijikeleza manje ( eyenziwe, yamanje, eddy yamanje) yenziwa ku-workpiece (izinto ezihamba kahle), ukushisa kukhiqizwa njengoba i-eddy yamanje igeleza ngokumelene nokuqina kwento.
Ukushisa ukushisa Ifomu lokufudumeza elisheshayo, elihlanzekile, elingangcolisi umoya elingasetshenziswa ukushisa izinsimbi noma ukuguqula izakhiwo zezinto ezibonakalayo. Ikhoyili ngokwayo ayishisi futhi umphumela wokushisa ulawulwa. Ubuchwepheshe obuqinile be-transistor yombuso buye benza ukufudumeza okufakwayo kube lula kakhulu, ukufudumeza okungabizi kakhulu kwezinhlelo zokusebenza lokungeniswa kwe-induction, ukwelashwa kokushisa, ukuncibilika kwangaphakathi, ukuncipha kokulinganisa, ukufakwa kokufakwa nokunye.
Ukushisa kwe-induction kwenzeka endaweni eqhutshwa kagesi (hhayi impela insimbi yamagnetic) lapho into efakwa ensimini ehlukahlukene. Ukushisa ukushisa kungenxa ye-hysteresis ne-eddy-current losses.
Amakhoyili wokungeniswa aklanywe kahle ahlanganiswe namandla kagesi wokungenisa anamandla futhi aguquguqukayo akhiqiza imiphumela yokuphinda ephindaphindekayo eqondene nohlelo olufunayo. Amandla we-induction aklanyelwe ukulinganisa ngokunembile ukushisa kwempahla futhi aphendule ekuguqulweni kwempahla yempahla ngesikhathi somjikelezo wokushisa kwenza ukufeza amaphrofayili ahlukahlukene wokushisa kusuka kuhlelo lokusebenza olulodwa lokushisa kube yiqiniso.
Inhloso ye Ukushisa ukufakelwa kungahle kube lukhuni ingxenye ukuvikela ukugqokwa; yenza ipulasitiki yensimbi yokwakheka noma yokwakha ibe yimo oyifunayo; i-braze noma yomthengisi izingxenye ezimbili ndawonye; ncibilikisa uhlanganise izithako ezingena kuma-alloys okushisa aphezulu, okwenza izinjini ze-jet zisebenze; noma nganoma iyiphi inombolo yolunye uhlelo lokusebenza.